Smartphone – AsiaApps
အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာ Razer ဖုန်းနဲ့ အပြိုင် gaming ဖုန်းအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Black Shark ကို Xiaomi မှတရားဝင် ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ဖုန်းဟာ တရုတ်ပြည် တစ်ခုတည်းမှာပဲ စတင်ထွက်ရှိခဲ့ပြီး မကြာသးခင်မှာ globally ထွက်ရှိဖို့ကို…
Apple ကြောင့် OnePlus 6T မိတ်ဆက်မယ့်ရက်ကို ရွှေ့ဆိုင်း
October 29, 2018 MoonSmartphone NewsNo Comment on Apple ကြောင့် OnePlus 6T မိတ်ဆက်မယ့်ရက်ကို ရွှေ့ဆိုင်း
အချိန် အကြာကြီး စောင့်ခဲ့ရတဲ့ OnePlus 6T ထွက်ရှိလာမယ့် ရက်ကို အရင်ကြေညာထားတဲ့ ရက်ထက် တစ်ရက်စောပြီး ထွက်လာမယ်လို့ OnePlus ရဲ့ CEO Pete Lau ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ အကြောင်းအရင်းကတော့ Apple ကြောင့်လို့ သိရပါတယ်။…
OnePlus 6T က Android Pie နဲ့ ထွက်လာမယ်လို့ OnePlus CEO အတည်ပြု
October 19, 2018 MoonSmartphone NewsNo Comment on OnePlus 6T က Android Pie နဲ့ ထွက်လာမယ်လို့ OnePlus CEO အတည်ပြု
အောက်တိုဘာလ ၃၀ရက်နေ့မှာ OnePlus 6T ကို မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်း ချပြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။ OnePlus6T မှာ သေးငယ်တဲ့ waterdrop notch ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး scanner ကတော့ in-display fingerprint scanner ပါဝင်ပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့…
Nintendo Switch နဲ့ မယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့ Hwawei Mate 20X
October 19, 2018 MoonSmartphone NewsNo Comment on Nintendo Switch နဲ့ မယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့ Hwawei Mate 20X
Huawei ဖုန်း အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ MateX ဟာ Nintendo Switch နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မယ်လို့တရုတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးပွဲမှာ လည်း Mate20Xနဲ့Switchကိုဘေးချင်းကပ်ယှဉ်ပြီးပြသပေးခဲ့ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံထဲမှာ ဒီအတိုင်းကြည့်ရင်တော့ အဆိုပါ device က Switch ပေါ်မှာ ပိုပြီးကောင်းမွန်နေတဲ့ ပုံစံ…
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်တုန်းကတောင် HTC U 11 မှာ Oreo update ရောက်ရှိလာတဲ့ အကြောင်းတွေတောင်ကျွန်တော်တို့ website ကဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက U11 ပြီးရင် U ultra နဲ့ HTC 10…
January 9, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Europe မှာ U11 အတွက် Oreo update ကိုသတ်မှတ်ချိန်အတွင်းမဖြန့်ချီနိုင်ခဲ့လို့တောင်းပန်စကားပြောခဲ့တဲ့ HTC!
HTC အနေနဲ့ U11 အတွက် Oreo Update ကိုစတင်ဖြန့်ချီခဲ့တာကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ နိုဝင်ဘာလ အလယ်လောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Oreo Update ကို တစ်ကမ္ဘာလုံး မှာရှိတဲ့ HTC U11 အတွက်ဖြန့်ချီခဲ့တာပါ။ ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ…
January 5, 2018 January 5, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Galaxy S8 နဲ့ S8+ အတွက် Rose Pink edition ဖန်တီးလိုက်တဲ့ Samsung!
Samsung Galaxy S8 နဲ့ S8+ အတွက် Rose Pink edition ကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ ၃ ရက်နေ့က UK မှာဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ LONDON, UK – 3rd January 2018 – Samsung…
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့တုန်းက Oneplus company ရဲ့ Co-founder ဖြစ်သူ Carl Pei ဆိုသူက OnePlus5update အသစ်မှာ Face unlock feature…